War-saxaafadeed Guddoomiye Muuse Biixi Cabdi oo la kulmay Safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya. |
War-saxaafadeed Guddoomiye Muuse Biixi Cabdi oo la kulmay Safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya.
Guddoomiyaha KULMIYE Md. Muuse Biixi oo uu weheliyo Guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee xisbiga Md. Axmed Cabdi Xuseen (Axmed Cabdi-dheere), waxay weftiga Safiirka la yeesheen kulan saacado qaatay oo ka dhacay huteelka Ambassador
ee caasimadda Hargeysa galinkii dambe ee maanta, kaas oo ay kaga wadahadleen arrimo ku saabsan danaha labada dal ee Somaliland iyo Ingiriiska iyo waxyaabaha ay ka wadashaqeeyaan.
Guddoomiyaha KULMIYE Mudane, Muuse Biixi waxa uu u sheegay in hawlaha loogu diyaaragaroobayo doorashooyinku gabogabo yihiin, maadaama diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinku dhammaad ku dhawdahay oo uu socdo gobolkii u dambeeyey oo ah Sool. Waxa kaloo uu u caddeeyey weftiga Ingiriiska mowqifka xisbiga iyo xukuumaddiisu inuu yahay in doorashooyinku ku qabsoomaan waqtigooda bisha March 2017, isl markaana ay horeba u dhammaystireen oo aanay waxba ka qabyo ahayn doorashada Madaxtooyada, balse caqabadda keliya ee jirtaa ay ku kooban tahay doorashada Golaha
Wakiillada oo xeerkii lagu dooran lahaa xildhibaannadu aannu weli diyaar ahayn.